Motorola waxay soo saareysaa Moto Z3 oo leh dareeraha sawirka faraha iyo Moto Mod ee 5G | Androidsis
Motorola waxay soo saareysaa Moto Z3 oo leh dareeraha sawirka faraha iyo Moto Mod ee 5G
Luis Lopez | | Motorola, Mobiles
Motorola ayaa soo bandhigtay calankeedii ugu dambeeyay ee sanadka, the Moto Z3. Qalabkan ayaa looga dhawaaqay munaasabad jimcihii la soo dhaafay ka dhacday magaalada Chicago ee dalka Mareykanka.
Moto Z3 ayaa noqonaya midkii ugu dambeeyay ee Sony soo bandhigto sanadkan, shirkadda ayaa taa ka dhawaajisay markan ma jiri doonaan Moto Z3 Force sidii caadiga ahayd tan iyo markii la bilaabay taxanaha Moto Z.
Moto Z3 muuqaalada
Moto Z3 wuxuu leeyahay a 6-inji AMOLED oo leh jajabyo ugu yar dhinacyada. Naqshadeynta waxaa ku jira Motorola kamaradeeda dhaqameed ee laba-dareemayaasha ah ee gadaasha, taas oo ka sameysan muraayad. Halkii aad ku dhejin lahayd dareeraha faraha ee dhinaca dambe ee qalabka, Motorola waxay go'aansatay inay dhigato dhinaca midig, hoosta badhanka mugga.
Xidhiidhka gaarka ah ee Mods ayaa wali sii haya booskiisa xaga dambe. Qalabku wuxuu ku habboon yahay Moto Mods-kii hore, marka lagu daro Motorola waxaa ku jira Moto Mod loogu talagalay isku xirka 5G, oo lagu soo saaray kooxda Verizon isla markaana qalabaynaysa Modem Snapdragon X50 taas oo u oggolaan doonta dadka isticmaala inay si buuxda uga faa'iideystaan ​​shabakadda 5G markii la helo sanadka soo socda.
Moto Z3 wuxuu leeyahay gudaha a Processor Snapdragon 835 halkii Snapdragon 845 ee la sii daayay sannadkan, sidoo kale waa la isku daray loogu talagalay 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keydinta gudaha ah.
Qeybta sawirada, Moto Z3 Waxay leedahay laba kamaradood oo gadaal ah, labaduba waa 12 MP. Sawirada iskaa wax u qabso waxaa lagu darayaa 8 MP sensor. Is-maamul a 3000 mAh batari laakiin Moto Mod 5G cusub ayaa ku daraya 2000 mAh dheeraad ah marka la isku xidho.
Markii hore, Moto Z3 waxaa laga heli karaa si gaar ah Verizon oo ku taal Mareykanka. Qalabku wuxuu imanayaa Ogosto 16. Qiimaha, Moto Z3 wuxuu ku kacayaa qiyaastii 400 euroWeli ma jiro wax xog ah oo ku saabsan imaatinka caalamiga ee aaladda laakiin waxaan rajeyneynaa in shirkaddu ay faahfaahin dheeraad ah ka bixin doonto dhowaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola waxay soo saareysaa Moto Z3 oo leh dareeraha sawirka faraha iyo Moto Mod ee 5G
Ogeysiiskii ugu horreeyay ee Galaxy Note 9 waa la sifeeyey
Oppo A3s: wuxuu ku dhawaaqay nooc cusub oo ah 3GB oo RAM + 32GB ah oo ah xusuusta gudaha